1.Used for ibhetshi isampulu yokukhulisa uvavanyo lwempendulo encinci, inokusetyenziswa enye okanye uhambo. Iityhubhu ze-CORBITION ze-PCR zenziwe kwinqanaba le-UPS yonyango yePolypropylene. Zonke iityhubhu ziyahambelana nomgangatho weplanethi eyi-96. Uyilo lodonga olucekeceke ukwenza ubushushu bube ngcono. Ukuqinisa ukutywina ikepusi kuthintela umphunga. Iityhubhu ziyafumaneka kubungakanani obahlukeneyo bokugcina iisampulu ezahlukeneyo.
I-0.1 ml, i-0.2 ml, isiqwenga esinye kunye nesi-8, imibala ebonakalayo kunye nemhlophe, iminqwazi ethe tyaba kunye neekepusi ezilawulwayo zinokukhetha. I-0.1 ml yeetyhubhu ziyafumaneka ngombala opaque omhlophe wokunyusa umqondiso kwiimvavanyo ezibonakalayo. Ityhubhu yePCR ziimveliso ezifanelekileyo zokukhawuleza kwePCR kunye nokusabela kwevolumu esezantsi. Zonke iityhubhu zingena-DNase-free, RNase-free, non-pyrogenic.
2. Inkqubo yolawulo lwe-Octet PCR
Umgangatho wemveliso awunakwahluka kwinkqubo yemveliso. Itekhnoloji yokuvelisa ephezulu kunye nezixhobo ezichanekileyo eziphezulu sisiseko somgangatho wemveliso. Uvavanyo lwe-PCR luhlawula ngokukodwa ubungakanani bodonga lwezinto ze-PCR, kunye ne-ultra-thin and uniform uniform wall ubukhulu iyafuneka ukuqinisekisa imodyuli yokufudumeza. Ubushushu buhanjiswe ngokufanayo kwiisampulu kwii-octuplets ze-PCR ukufezekisa ukuchaneka kweziphumo zovavanyo.
3, ethe tyaba ekukhanyeni,
Ngenxa yobuninzi bezixhobo zePCR ezibengezelayo, indlela ekhanyayo kufuneka iqhutywe ukusuka phezulu kwizinto ezinokusetyenziswa ukuya ngaphakathi kumbhobho, ngoko ke ukungabonakali kwezinto ezisetyenziswayo kufuneka kuphakame ngakumbi.
Ukutywinwa kokusebenza kwesembozo setyhubhu kunye nomzimba webhubhu kufuneka kulunge ngakumbi ukuthintela ukukhutshwa kwesampulu kwityhubhu, kuthintele ukungcoliseka komnqamlezo, kunye nokuqinisekisa ukuchaneka kweziphumo zovavanyo!
5. Indawo yemveliso
Ngezixhobo ezifanelekileyo, iworkshop ecocekileyo nayo ibaluleke kakhulu. Ukuba isampulu ingcoliswe zizinto ezimdaka, iziphumo ziya kuba zichanekile kakhulu. Unobangela wophando utya ixesha kwaye usebenza ngamandla. Ulawulo lomgangatho olungqongqo lwemveliso lunokuqinisekisa ukusebenza kwebhetshi nganye yeemveliso. Uzinzo lokuqinisekisa ukuchaneka nokuphindeka kwedatha yovavanyo
1.Ukhetho lokuqaqamba okuphezulu kokungenisa izinto zepolypropylene, akukho mvula.
2. Akukho DNA okanye i-RNA enzymes.
3.The ultra-ezingcakacileyo iyunifomu ityhubhu eludongeni kufezekiswa uyilo ngundo sokubumbela. Udonga lwetyhubhu efanayo ecekeceke ngokubonelela ngesiphumo sokuhambisa ubushushu kwaye ikhuthaza ukwandiswa kwesampulu yokukhulisa.
4.Vala ngokuqinileyo itywina umbhobho ukuthintela ungcoliseko.
Imveliso ilungele uninzi lwezixhobo zePCR ezibengezelayo.
6.Made ukusuka UPS Plastic Class VI Polypropylene.
7.Ukuhambelana nomgangatho weplanethi eyi-96
I-8.Udonga oluncinci lokuhambisa ubushushu okungcono luyafumaneka ngombala ocacileyo kunye nomhlophe, ikepusi ethe tyaba kunye nekepusi ejikeleziweyo
9.Ukutywina uphawu loyilo ukukhusela umphunga
10.Sterile ukufikelela kwinqanaba le-SAL 10-6
HAYI. Inkcazo Umthamo Cap Inkcazo Ukupakisha Inzalo
Ikhonkco Ityhubhu yePCR 0.2ml Iflethi okanye iDome Ongatshatanga Ngama-20000 / Ctns ukhetho
PC0021 8-kakuhle iPRR strip 0.2ml Iflethi okanye indlu ekwicomplex 8 Umtya 5000 / Ctns ukhetho
Ikhompyutha Ityhubhu encinci yePCR 25ul Iflethi okanye indlu ekwicomplex Ongatshatanga 12000 / Ctns ukhetho
Ikhonkco001 8-kakuhle iPRR strip 0.1ml Iflethi okanye indlu ekwicomplex 8 Umtya 5000 / Ctns ukhetho
Ikhompyutha Ityhubhu yePCR 0.1ml Iflethi okanye indlu ekwicomplex Ongatshatanga 2500 / ingxowa okanye 10000 / ingxowa ukhetho
Egqithileyo Iingcebiso malunga nepipette
Okulandelayo: Isitya sePCR
I-PC0021 0.2ml 8 ityhubhu yePCR
I-PC0050 25ul ityhubhu encinci yePCR
I-PC0051 0.1ml 8 ityhubhu yePCR
PC1001 0.2ml PCR ityhubhu tyaba & idome cap
Intsholongwane yeDNA / iRNA yokuThintela (ikholamu)